ShareDrop, yemahara "AirDrop" yekuchinjana mafaera | Linux Vakapindwa muropa
ShareDrop, yemahara «AirDrop» kuchinjanisa mafaera kubva kubhurawuza
Imwe yesimba raApple isystem yayo. Nayo, isu tinogona kutanga basa pane chimwe chishandiso uye ndokutevera pane imwe, kugovera zvinyorwa uye zviyeuchidzo zviri nyore, kana kugovana mafaera neAirDrop. AirDrop ndiyo sisitimu inoshandiswa neApple zvishandiso kutumira ese mafaera pamusoro peWi-Fi, inokurumidza uye yakachengeteka kupfuura Bluetooth, asi ko kana tichida kutumira / kugamuchira faira kuenda / kubva kune isiri-Apple chishandiso? Izvo hazvitishande isu. Ehe, kune dzimwe nzira, senge ShareDrop.
ShareDrop i "clone", ona zvinyorwa, zveApple's AirDrop, asi zviri nani kwazvo kune zvikonzero zvakawanda. Chekutanga ndechekuti inoshanda pane chero chishandiso chine browser Iyo ine kugona kurodha pasi mafaera, ayo ari angangoita ese akangwara zvigadzirwa. Chinhu chechipiri ndechekuti isu hatifanirwe kuisa yekuwedzera software. Uye zvakare, ShareDrop inoshandawo pamakomputa emarudzi ese, kusanganisira aya anobva kuApple akasiya "akarembera" mune yazvino vhezheni ye macOS.
ShareDrop: govera mafaera pamakomputa akabatana pane imwecheteyo netiweki yeWi-Fi
Kugovera mafaera neShareDrop kuri nyore kwazvo:
Kutanga tinovhura peji rako rewebhu nekudzvanya pa Iyi link (Ndine chokwadi chekuti unozvichengeta mune zvaunofarira). Ichi chinhu chatinofanira kuita pane ese mairi, kureva kuti, iyo ichaendesa iyo faira uye iyo ichaenda kuigamuchira. Tichaona chimwe chinhu senge chiri kutungamira chinyorwa ichi (chinyorwa "ShareDrop" Ndachiwedzera), mhuka inoti "Iwe" pazasi uye imwe (s) pamusoro.
Tinosarudza mhuka yatiri kuda kutumira iyo faira.
Isu tinosarudza iyo faira yatinoda kutumira. Tinogona zvakare kudhonza uye kudonhedza iyo faira pamusoro pemhuka inogamuchira.
Pachinhu chinogamuchira, isu tinogamuchirawo chiziviso. Uye ndizvo chete. Iyo faira ichatorwa senge chero imwe yatinotora pasi pa internet, ichitipa mukana wekuichengeta kana kuitarisa.
ShareDrop futi inotibvumidza kutumira mafaera kumidziyo isina kubatana kune imwecheteyo netiweki yeWi-Fi. Kuti tiite izvi, tinodzvanya pane yekuwedzera chiratidzo (+) kumusoro kurudyi, isu tinoteedzera iyi link yaunopa uye isu tinozoitumira kune chero watinoda kutumira iyo faira kwaari Sezvauri kuona, zvese zviri nyore kwazvo, zvinoshanda zvakakwana uye hatidi zvinopfuura webhurawuza. Izvo zvakakodzera kuti ubhukumise peji racho, handizvo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » ShareDrop, yemahara «AirDrop» kuchinjanisa mafaera kubva kubhurawuza
Komenda, kana iwe ukataura, hapana munhu akataura ... taura neni :)
Pindura kuna Dinimxis